Xaaladd nolo xumo oo laga soo sheegayo kaamamka barakacayaasha ee Bur-saalax. – Radio Daljir
Janaayo 15, 2013 3:21 b 0
Bur-saalax, Jan 15- Wararka naga soo gaaraya deegaanka Bur-saalax ee gobolka Mudug ayaa soo sheegaya inay xaaladd nolol xumo oo ka sii darayso ay ka jirto kaamamka barakacayaasha ee deegaankaasi.
C/risaaq C/laahi Ow-muuse oo ka mid ah dadka deegaanka Bur-saalax oo maanta la soo xiriiray radio daljir ayaa sheegay in dhibaato bani’aadantimo ay haystaan dadka barakacayaashaa ee ku nool kaamamka isla markaana ay u baahan yihiin gargaar.
Ow-muuse ayaa dhamaan hay’adaha,dawladda iyo cid walboo dadkaasi ka dan-qanaysa ay wax la soo gaaraan walaalahood dhibaataysan.
Bur-saalax ayaa ka mida deegaanada galbeed ee gobolka Mudug kuwaasoo ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo barakacayaala, waxaana inta badan la soo gudboonaada dhibaatooyin nololeed oo isugu jira biyo,baad iyo hoy-la’aan.
Urur siyaasadeedka Hor-Cad oo ififaalo ka muujiyay inuu hirgallo nidaamka axsaabta ee Puntland